प्रवास Archives • Page3of 24 • Nepal's Trusted Digital Newspaperप्रवास Archives • Page3of 24 • Nepal's Trusted Digital Newspaper
सोमवार, असार २०, २०७९
गायिका सुरक्षा सेन्चुरीको स्वरमा ’तिमी बिना’ बजारमा
‘सिप भएका हरु बेरोजगार बस्नु पर्दैन’ : उपप्रमुख गुरुङ
मन्त्री बराल माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय सदस्य मनोनित
अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनामा हुने एनआरएनए एनसिसिको ज्ञान सम्मेलनमा महामन्त्रि शर्मा सहभागी
नेपाल सोतोकान कराँते संघद्वारा जनप्रतिनिधिहरू सम्मानित
किशोर पन्थीको पुस्तक ‘अन्ट्रान्सलेटेबल’ अमेरिका सहित विश्वका १२ देशमा अमेजनमार्फत हार्डकभर र पेपरब्याकमा
पोखरा हेमजाको सुइँखेत क्षेत्रमा पानी जम्दा बस्ती नै डुबानमा
सालघारीका ‘मिने’को उपचारमा समस्या, आर्थिक सहयोगको अपिल
उत्तमको शव्द संगीत अनि अनामिकाको स्वरमा ”तिम्लाई मैले फुल” सार्वजनिक
पोखरामा सह चालक विनै गाडीभाडा संकलन
अविरल वर्षाको कारण कास्की जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा क्षति, प्रहरीद्धारा उद्धार(फाेटाेसहित)
खुमन र शान्तीश्रीको स्वरमा आयो तिज गीत ‘थरी थरी भोले’
कंगोमा खटिएका बेला विद्रोहीको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका नेपाली सेनाकाे परिचय खुल्याे
३ महिना अगाडि
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसन अन्तर्गत नेपाली सेनाबाट कंगोमा खटिएका बेला विद्रोहीको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका सिपाहीको परिचय खुलेको छ । मृत्यु हुनेमा सुर्खेतको गुर्भाकोट–१४ घर भएका सिपाही अनिल गुरुङ रहेको नेपाली सेनाको जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । अपरेसन ‘बाली’को दौरान प्रमुख सेनानी निकिल कुँवरको कमाण्डमा खटिएको नेपाली शान्ति सेनाको टोलीमाथि मंगलबार विद्रोही […]
प्रधानमन्त्री देउवासहितको नेपाली टोली बनारसमा, आदित्यनाथद्धारा स्वागत
नयाँ दिल्ली । तीन दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको बनारस पुग्नुभएकाे छ। एयर इण्डियाका जहाजबाट आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवासहितको नेपाली टोली बनारस पुगेको हो। प्रधानमन्त्री देउवालाई उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले स्वागत गर्नुभएकाे छ। बनारस रहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न मठमन्दिरहरुको दर्शन तथा अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा […]
एनआरएनए को १० र ११ तय भएको १० औं महाधिवेशन स्थगित
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को चैत्र १० र ११ गते तय भएको १० औं महाधिवेशन स्थगित भएको छ । उच्च अदालत पाटनले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरी निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम/कारवाही नगर्नू-नगराउनू भनेको छ । आदेशसँगै एनआरएनएको निर्वाचन समितिले निर्वाचनका सबै काममा रोक लगाएको हो । सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्दै अदालतमा गरिएको मुद्धा फिर्ता लिने […]
तीन अध्यक्ष प्रणालीमा एनआरएनए
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा विधान विपरीत सामूहिक नेतृत्वमा जाने सहमति भएको छ। संघ फुट्नबाट जोगाउने नाममा डा. बद्री केसी, कुल आचार्य र रबिना थापा तीन जना अध्यक्ष बन्नुहुनेभएकाे छ । उहाँहरू तीनै जना अध्यक्षका आकांक्षी हुनुथ्याे। उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिव पनि एकभन्दा बढी बनाउने सहमति भएको छ। तर, विधानले बहुअध्यक्षको व्यवस्था गरेको छैन। […]
अस्ट्रेलियाबासि नेपालीले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको सहयोगको उपराष्ट्रपतिद्वारा प्रशंसा
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले अस्ट्रेलियाबासि नेपालीहरूले नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा गरेको सहयोगको उच्च प्रशंसा गर्नुभएको छ । नेपालमा पारदर्शी रुपमा समाजसेवा गर्न सजिलो बनाउने वेबसाइटको शुभारम्भ गर्दै उपरास्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले बिदेशमा रहेका नेपालीहरुले गरेको काम निकै महत्वोको हुने गरेको बताउनुभयो । समाजसेवामा पारदर्शिता मुख्य चुनौती भएकाबेला स्वर्णिम युग फाउन्डेसनले निर्माण गरेको https://www.swornimyug.org मा गएर हरेक […]
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहित एमाले नेता आज चीन प्रस्थान
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसहितका नेता चीन प्रस्थान गर्नुभएकाे छ । पौडेलको नेत्रित्वमा स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारी, लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्पराज कंडेल र केन्द्रीय सदस्य मीना रखाल आज बिहान चीन प्रस्थान गर्नुभए काे हाे । उपाध्यक्ष पौडेल नेत्रित्वको प्रतिनिधिमण्डलले चीनको कुन्मिङमा आयोजना हुने ‘इकोनोमिक कोअपरेसन एण्ड कल्चरल एक्सचेन्ज’ कार्यक्रममा सहभागी […]
गैरआवासीय संघ बिरुद्ध गलत सूचना प्रवाह नगर्ने सदस्यहरुलाई संघकाेअपिल
काठमान्डाैँ । गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको तयारी तिब्र रुपमा भैरहेको छ । संघको महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको तयारीको लागि संघका अध्यक्ष कुमार पन्त अहिले काठमाण्डौंमा सकृय हुनुहुन्छ । संघको नयां नेतृत्व चयनको लागि निर्वाचनका अधिकांस प्रकृयाहरु सम्पन्न भएर आगामी २४ र २५ तारिख मतदानको गर्ने तयारी निर्वाचन समितिले गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली […]
युद्धरत युक्रेनबाट भारत हुँदै स्वेदश फर्किए चार नेपाली
युद्धरत रहेकाे युक्रेनबाट चार नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। भारतले सञ्चालन गरेको अपरेशन गंगाअन्तर्गत चार नेपाली नयाँदिल्ली हुँदै युक्रेनबाट स्वदेश फर्किएका हुन् । अपरेशन गंगा अन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सहयोग गरेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत सरकार र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिनुभएकाे छ। हालसम्म करिब ६ सय नेपालीले युक्रने छोडिसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। […]
‘पाँचौ ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड’ जुलाई ३ अमेरिकाको टेक्ससमा हुँदै
काठमाडौं । ‘आफ्नै नाम, आफ्नै शान, आफ्नै पहिचान, गाउँदेखि विश्वसम्म’ भन्ने नारासहित सन् २०१६ बाट सुरु भएको ‘ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड’ को पाँचौ संस्करण अमेरिकाको टेक्सस राज्यको ड्यालस शहरमा आयोजना हुने भएको छ । मंगलवार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच सन् २०२२ जुलाई ३ तारिखमा अवार्ड आयोजना हुने जानकारी भएकाे छ। ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डको पाँचौ […]
रुस-युक्रेन द्वन्द्वमा फसेका २४४ नेपाली सुरक्षित रुपमा आफ्नो गन्तव्यमा
काठमाडौं। रुस-युक्रेन द्वन्द्वका कारण प्रभावित २४४ नेपाली सुरक्षित रुपमा आफ्नो गन्तव्यमा पुगेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) द्वारा गठित ‘रुस-युक्रेन द्वन्द्वप्रभावित नेपालीको सहयोग एवं उद्धार उच्चस्तरीय समिति’ले नेपाली सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पुगेको जनाएको छ । सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले युक्रेन छाडेर पोल्याण्डामा ६०, स्लोभाकिया र रोमानियामा १२-१२, हङ्गेरीमा चार र माल्डावामा दुईजना […]
सुन्दर परियारको पञ्चेबाजा गीत ‘साइली’ सार्वजनिक
डा. कोइराला रिसर्च इंस्टीट्यूट फर बायोटेक्नोलोजी एण्ड बायोडाइभर्सिटी को पाँचौँ साधरणसभा सम्पन्न